Rose of Sharon: လေးစားရသောတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်
Posted by rose of sharon at 9:12 PM
ကရင် အမျိုးသားကြီး စောဘဦးကြီးအကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ်...
Kay August 8, 2009 at 11:11 PM
သားကြီး August 8, 2009 at 11:33 PM
ကြားဖူးတာတော့ကြာပါပြီ သူ့အကြောင်းတော့ သေသေချာချာ တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးသေးဘူး
ဒီခေတ်ဆိုးကြီးထဲမှာ သူရဲကောင်းဆိုတာနည်းပါးလာတာနဲ့အညီ တစ်ခါက သူရဲကောင်းတွေဆိုတာကိုပြန်ပြီးအောင်းမေ့ရတယ် သူတို့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာတွေတွေ့ရင် လောဘတကြီးဖတ်မိတယ် သူယုတ်မာတွေကောက်ကျစ်လေလေ သူရဲကောင်းတွေရဲ့
အတိတ်တွေ အရိပ်တွေကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ လူ့ငနွားတစ်သိုက်ကိုတွေ့ရတော့ တော်တော်သနားမိတယ်
ဖတ်ရင်း ကရင်အာဇာနည်ကြီးကို လေးစားစွာဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်........။
ထို့အတူ....ဒီပိုစ်လေးအတွက် အစ်မrose of sharonကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
ကျောပိုးအိတ် August 8, 2009 at 11:47 PM
သမီးကလေ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကို အရမ်းချစ်တာ။ သူတို့ အကတွေက မြူးတယ်လေ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ တောင် ခုန်ပေါက်ချင်တယ်။
ခုတော့ ကရင်အာဇာနည် (ဦး)စောဘဦးအကြောင်းလာဖတ်သွားတယ်နော်။
အနော် August 8, 2009 at 11:48 PM
လေးစားဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဦးညွှတ်အလေးပြုလိုက်ပါတယ်
သူတို့က လူသာ သေတယ် နာမည်မသေတဲ့ တကယ့် အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေပါ
Angel Shaper August 9, 2009 at 1:05 AM
မ ရှာရွန်းရေ.... သမီးမသိသေးတဲ့ ဦးစောဘဦးအကြောင်း သိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တကယ်လေးစားဖို့ ကောင်းတဲ့ မျိုးချစ်တိုင်းရင်းသားကြီးတွေ အများကြီး ပျောက်နေတာ ဒီတက်ဂ်လေးတွေကြောင့်သိခွင့်ရလို့လဲ ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်နော်။
kiki August 9, 2009 at 1:15 AM
လေးစားထိုက်သူများကို လေးစားခြင်းဟာ မင်္ဂလာတပါး ပါ။
ကရင် တိုင်းရင်းသားမျိုးချစ်ခေါင်းဆောင် ဦးစောဘဦး ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြီးအနစ်နာ ခံသွားခဲ့ပုံမှာလည်း လေးစားထိုက်ပါတယ် ။
လူသေပေမဲ့ နာမယ် မသေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦး ကို ဖေါ်ပြပေးတဲ့ မရို့ စ် ကို လည်း ကျေးဇူးပါ နော်...
busymozzee August 9, 2009 at 2:00 AM
ဒါဘလုဒါဖိုး ရို့စ်ရေ.... အမလဲ ကရင်တွေကို ခင်မင်တယ်... ကရင်ပြည်မှာ ခြောက်နှစ် တာဝန်နဲ့နေဘူးတယ်လေ.... လင့်ထားတာကိုလဲခွင့်ပြုပါနော်
လသာည August 9, 2009 at 8:08 AM
ကရင် အမျိုးသား အာဇာနည်ကြီးအကြောင်းကို တင်ပြပေးတာ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတလည်း ရတယ်။ အတုယူစရာတွေလည်း လေ့လာရတယ်.။
နဒီမိုးညို August 9, 2009 at 9:01 AM
rose of sharon August 9, 2009 at 9:35 AM
မီးငယ်နဲ့ကေ>လာလည်သွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်... Angel Shaperနဲ့နဒီမိုးညို>ဒီtagလေးကြောင့်စောဘဦးကြီးအကြောင်းသိသွားကြတယ်ဆိုတော့ မမရေးရကြိုးနပ်တာပေါ့... ဒီtagရဲ့ကနဦးခေါင်းဆောင်ကြီး ကိုလူထွေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိတယ်
ကျောပိုးအိတ်>ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်တဲ့ကျောပိုးအိတ် လှလှလေးကို မမကလဲချစ်ပါတယ်ကွယ်
ဟုတ်တယ်အနော်... သူဟာတကယ့်သမိုင်းဝင်အာဇာနည်သူရဲကောင်း တယောက်ပါ...
မိုးစက်အိမ် August 9, 2009 at 2:36 PM
အင်းခုလို ကျွန်တော်မသိရ သေးတဲ.မျိုးချစ်
အာဇာနည် ကရင်အမျိုးသားကြီး စောဘဦးကြီး
အကြောင်း ဖတ်ခွင်.ရတဲ. အတွက်ကျေးဇူးအမရေ
သစ္စာ ဖောက်တွေကတော. မိုက်ဇာတ်သိမ်းကြမှာပါ...
တမလွန်မှာလည်း အဲ.အပြစ်တွေ ခံစားနေရမှာပါ ...
ငှက်ကလေး August 9, 2009 at 2:36 PM
ကရင် အမျိုသားကြီးအကြောင်း လေးစားစွာ လာဖတ်သွားပါတယ်နော်
ကိုလူထွေး August 9, 2009 at 3:39 PM
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးရဲ့အကြောင်းကို အခုလို ရှာဖွေဖော်ပြပေးတဲ့အတွက်ရော... ဒီတဂ်ပိုစ့်ကို အရေးတယူ ရေးပေးတဲ့အတွက်ရော လေးလေးနက်နက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...
တကယ်တမ်းတော့ ကရင်ရယ် ဗမာရယ်ဆိုတာ ညီအကို ဆွေမျိုးတွေ မဟုတ်လား... ပြည်သူအချင်းချင်းမှာတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှ အာဃာတတွေ အငြိုးအတေးတွေ မရှိကြပါဘူး...
ဘုံရန်သူ အာဏာရူးတသိုက်ကြောင့်သာ တို့ပြည်သူပြည်သား တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ဒုက္ခပင်လယ်ကြီးမှာ မျောနေကြရတာပါ...
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် မြင့်မြတ်တဲ့စေတနာ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ အသက်ပေးကြိုးပမ်းသွားတဲ့ ခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားမိပါတယ်...
ကောင်းကင်ပြာ August 10, 2009 at 2:38 PM
rose of sharon August 10, 2009 at 5:02 PM
ဟုတ်ပါတယ်ကိုလူထွေး... တိုင်းရင်းသားတွေဟာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေပါ... လူယုတ်မာတွေသွေးခွဲလို့တချို့တွေသွေးကွဲရတာပါ.. လာလည်တာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် :)
ကျေးဇူးပါကောင်းကင်ပြာ... ကျမတောင်မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီထင်တယ်... လာလည်အုန်းမယ် :)
ခြေလှမ်းသစ် August 10, 2009 at 10:20 PM
မန့်ထားတာတွေ အကုန်ပျောက်ကုန်ပီ... ဘာဖြစ်ဖြစ် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် တယောက်ကို ယခုလို ဖော်ကျူးပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ
မြစ်ကျိုးအင်း August 10, 2009 at 10:56 PM
အခုချိန်မှာတော့ ကရင်အပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သမိုင်းကို မှေးမှိန်အောင်လုပ်ထားတယ် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတယ်
ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေကတော့ အားလုံးတသားထဲပါပဲဗျာ..။
ဒီလို အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကို လူတွေပိုပြီးသိအောင် သတိရအောင် ရေးပေးတာ ကောင်းမွန်ပါတယ်...။
မေလေး August 11, 2009 at 9:56 AM
လေးစားဖွယ် ကရင် အမျိုးသားကြီး စောဘဦးကြီး ကို ဦးညွှတ်အလေးပြုသွားပါတယ်။
ဂျာမုန်းဒန် August 11, 2009 at 11:27 AM
မိုးကောင်းသူ August 11, 2009 at 1:25 PM
alezee August 12, 2009 at 9:29 AM
ခြေလှမ်းသစ်၊မြစ်ကျိုးအင်း၊မေလေး၊ဂျာမုန်း၊မိုးကောင်းသူ အားလုံး လာလည်ပြီး ကော်မန့်ရေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်....
လသာည August 13, 2009 at 10:37 AM
ပို့စ်ကွန်မန့်ကရေးပြီးသား..ဟဲဟဲ ဒါက သီးသန့် ။ စီဘောက်မှာ ရှုပ်မှာစိုးလို့ ဒီမှာရေးခဲ့တာ။ facebook ကို ရောက်တယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး လန့်ပြေးသွားပြီလား..ဟားဟား
ရို့စ်ပုံတွေလည်း ကြည့်သွားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်လေးနဲ့ တူတယ်။ ချောမှချော..။
facebook ကလေ သိပ်မရောက်ဖြစ်ဘူး။ တစ်လမှတစ်ခါ။ အသွားများတယ်ဆိုတောင် တစ်ပတ်မှ တစ်ခါလောက်ရောက်တာ..။ တကယ်လို့ facebookမှာ မတွေ့ဖြစ်ရင် စိတ်ပူမှာစိုးလို့ ကြိုပြီး request လုပ်ထားတာ.. :P
နေကောင်းသွားပြီဆိုလို့ ၀မ်းသာသွားပြီ..။ဧကန္တ မဟုတ်မှလွဲရော
ပြင်သစ်ရောက်နေသူကို လွမ်းပြီး လွမ်းဖျားဖျားနေတာ မဟုတ်လား..ဟွန်းဟွန်း.. သိနေတယ်သိနေတယ်..။ :D
လူကျန်းမာရေးရော နှလုံးကျန်းမာရေးရော ဂရုစိုက်ပါ ခင်ဗျာ...
rose of sharon August 13, 2009 at 6:24 PM
လသာညရေ.. မဖျားပါဘူးကွယ်... ပြင်သစ်ရောက်နေသူကိုသတိရပေမဲ့ ဖျားလောက်အောင်တော့ မလွမ်းပါဘူး... အိမ်ထောင်သက်ကဆယ်နှစ်ကျော်နေပြီလေ....ခုလိုဂရုတစိုက်အားပေးတတ်တဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းလေးရှိနေတာ တကယ်ကိုဝမ်းသာမိတယ်...
it is true that we all r brothers whether u r karean or burmese.i wish we always want to live together in one land.i dont want seperate.to live together,we burmese have to show our love to them.
ehehpoe May 21, 2012 at 4:00 PM